नेकपाको एउटा नीर्णय जस्ले विश्वलाई जुरुक्कै उठायो , यो हो त्यो नीर्णय.. - Kailash Post
नेकपाको एउटा नीर्णय जस्ले विश्वलाई जुरुक्कै उठायो , यो हो त्यो नीर्णय..
सत्तारूढ दल नेकपाले भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटबारे केही नरम शैलीमा सोमबार पार्टीको धारणा स्पष्ट पारेको छ । सचिवालय बैठकले यसअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जारी गरेको वक्तव्यको समेत समीक्षा गर्दै कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने धारणा अघि सारेको हो ।
भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुवाँ गुइदोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि भेनेजुएलामा राजनीतिक संकट चुलिएको छ। उक्त संकटलाई लिएर अमेरिका र चीनलगायतका शक्ति राष्ट्रहरू विभाजित भइरहेका बेला गत माघ ११ गते नेकपा अध्यक्ष दाहालले विज्ञप्ति जारी गरी मडुरोको पक्ष लिएका थिए।
दाहालको वक्तव्यमा भेनेजुएलामा अमेरिका र उसका पक्षधर राष्ट्रको हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको र साम्राज्यवादी कुको प्रयास भएको उल्लेख थियो। भेनेजुएलाका जनताविरुद्ध ‘ग्रान्ड डिजाइन’ भएको देखिएको उनले उल्लेख गरेका थिए।
यही विषयलाई लिएर अमेरिकासँगको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्न थालेपछि नेकपा सचिवालयले सोमबार थप स्पष्ट पारेको हो। नेकपा स्रोतका अनुसार दाहालको वक्तव्यमा कूटनीतिक भाषा प्रयोग हुन नसक्दा समस्या आएको विश्लेषण नेताहरूले गरेका थिए।
दाहालको वक्तव्यमा सार्वभौम राष्ट्रप्रति कसैको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने आशय ठीकै भए पनि सिधै अमेरिकाको नाम उल्लेख गर्नु, ‘साम्राज्यवादी कु’ को प्रयास र ‘ग्रान्ड डिजाइन’ भएको भन्नु अनावश्यक रहेको नेताहरूले बताएका थिए। ‘वक्तव्यमा केही भाषागत समस्या थिए, कूटनीतिक भाषा प्रयोग भएन कि भन्ने हाम्रो पनि बुझाइ हो,’ नेकपा सचिवालयका एक वरिष्ठ नेताले भने, ‘त्यसैले यसबारेमा थप स्पष्ट पारेका हौं।’
बधाई बधाई ! नेपालको एेतेहासीक सफलता : टी ट्वान्टी र ओडीआई सीरीजमा शान्दार जीत
क्यान्सर किन हून्छ , कसरी रोक्ने ? पुरा पढनुहोस र सबैको जानकारीका लागी सेयर गर्नुहोस